Ndezvipi zvakanakisisa SEO mapeji kuti zvizadzise mabhizinesi angu mune zvakakwana?
Ngatitarisei - dzimwe nguva kuita sarudzo yakanaka pakati pemhando dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana dzekutsvaga kutsvaga vese vese vane "zvakanakisisa SEO mapeji". "Asi nzira yekuwana nayo zvakakwana sei? Sezvo zvinogona kutora nguva yakawandisa, kungova kuparara pakutarisa kuburikidza nezvizhinji zvezvirongwa uye makambani ekugadzirisa. Uye iyo inenge iri basa rakaoma kwauri, ndinofanira kubvuma, nokuti nhasi, inenge iri pabasa rose rekutsvaga rekutsvaga rinowanzobhadhara pane zvakananga zvinangwa uye zvigadziriswe - kuti zvose zvigadziriswe mune imwe puragi. Asi pano inouya chikamu chemashoko akanaka. Ndinokupa netsamba shomanana yezvikurudzira iwe unogona kuwana zvinobatsira kana uchiita sarudzo yako yakakwana pakati pezvakanakisa zveSeO pakapatari.
Yakawanda, tinouya nemhando mbiri dzekupa, zvakasarudzika kana kuti zvakasiyana. Sezviri pachena, mazano makuru haazomboiti seSOO zvakanakisisa pakurongwa. Zvisinei, ivo vachiri kupa zvimwe zvinobatsira zvinonzwisisika, zvichida mukati mehupenyu hwavo hushoma hunoita basa. Chokutanga pane zvose, zviyero zvakakwana zviri kuuya pamutengo wakaderera, unovhara runyoro ruduku rwezvinhu zvinokosha zvekugadzirisa mabasa, akakwanisa kukupa mamwe mhinduro chaiyo pakusimudzira kushandiswa. Kana ndiri ini, ndinotenda kuti zvinyorwa zvitsva hazvirevi kuva zvigaro zvakanakisa, asi ivo vachiri kusiya mukamuri kuti mufambire mberi. Kana iwe uri muchengeti wemabhizimisi ari muIndaneti, ingoitora iyo yekutanga yekutongwa uye uwane mavambo akanaka nekunzwisisa zvidzidzo zveSearch Engine Optimization.
Seti yakagadziriswa yekutsvaga kushandiswa kwemashumiro kubva kumutengesi anovimbwa, netsanangudzo, ingangodaro ndiyo yakanakisisa SEO pakatengesa. Hungu, kutyaira iwe webhusaiti kunyoresa nekusimudzirwa kwemashumiro asiri nani kupfuura kutora pasina chinhu zvachose, hapana chikonzero chekutaura. Asi ini ndinotenda kuti kuongorora mararamiro e SEO uye kupa mvumo kune zvikomborero zvakagadziriswa zvehutano hwakakodzera kutsvaga kugadzirisa hurongwa huri kure nesarudzo yakaumbwa zvakanaka. Hungu, rubatsiro rwomunhu hunoita kuti iwe uwedzere, asi wakatanga kufunga nezvezvinangwa zvebhizimisi rako uye kunyatsogadziriswa neboka rakazara revatengesi vedijiti rinowanzoratidza kudzoka kunoshamisa mukutsvaga (ROI).
Zvakanaka, ndinofunga iye zvino ndiyo nguva yatakapfuurira, sezvo zvinhu zvose zvichifunga kuti zviri kwauri kuti usarudze nenzira ipi yekutsvaga tsvakiridzo yako yekutsvaga injini uye mubatsiri wepi kuti aite nayo. Iyo chete mazano andinogona kukupa iwe kwekanguva ndeyekuchengeta maziso ako pane zvauri kuwana. Uye mubvunzo apa hausi pamusoro pematengo emutengo kana nguva yakasara. Iko kutsvakurudza kwakarurama kunogona kukurumidza kuendesa yako yose yepurojekiti yeprojekiti kune hutsika hwakasimba uye huchagara kwenguva refu. Imwe nzira yakapoteredza, kuita kwako zvekutengeserana kungangodonhedzwa kuti urege kuvhiringidzwa kusati wamboonekwa nevanogona vatengi. Ndokusaka usambozeza kuongorora zvakadzama uye kuongorora kaviri pane zvakanakisisa SEO mapeji iwe uchange uine bhizinesi rako. Ingosimbidza paunotarisa mune zvose zvezvinhu zvose zvekutsvaga kutsvaga iwe uri kuisa pasi pekufungisisa - kutanga kubva kumitambo yekutanga sekushandiswa kwemashoko makuru, kuverenga kwehuwandu hwehuwandu, nekunyorwa kwekunyoresa, kune zvimwe zvakakosha zvakakosha kushanda zvakafanana nekutsvaga kwakakodzera, analytics, blog posting, etc Source .